Cardimax (ကာဒီမက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cardimax (ကာဒီမက်စ်)
Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cardimax (ကာဒီမက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cardimax® က ို အောက်ပါရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Cardimax® ကို အစာနှင့်သောက်ပါ။ မဝါးပါနှင့် မချေပါနှင့်။
Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cardimax® ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Cardimax® ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Cardimax®
Cardimax® ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Cardimax® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Cardimax (ကာဒီမက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Cardimax® ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ကျောက်ကပ် ရောဂါ၊ ပါကင်ဆန် အကြောရောဂါနှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးပြသနာများရှိလျှင်
ခြေထောက် နှင့် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုမူမမှန်သည့်ရောဂါများ ဖြစ်နေလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါဆိုးကျိုးများခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသရမည်ဖြစ်သည်။
အနေအထား အပြောင်းအလဲတွင် သွေးပေါင်ကျခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Cardimax (ကာဒီမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cardimax® ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Cardimax သည် MAO inhibitors ဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cardimax (ကာဒီမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cardimax® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cardimax (ကာဒီမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cardimax® ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ }
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လူကြီးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏမှာ ၁ နေ့လျှင် ၁ ပြားဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Cardimax (ကာဒီမက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Cardimax® ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Cardimax®-SR ၆၀ မီလီဂရမ် ဆေးပြား
Cardimax® ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။